မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မီလီယံနာဘဝကနေ ချွတ်ခြုံကျအောင် မွဲသွားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေး ဘင်းဘင်း – CeleYwar
CeleYwarSharing daily news for you
မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မီလီယံနာဘဝကနေ ချွတ်ခြုံကျအောင် မွဲသွားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေး ဘင်းဘင်း
တရုတ်မင်းသမီးလေး ဖန်ဘင်းဘင်းကတော့ ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးကြတဲ့ ၊ မြင်ဖူးနေကြ ဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးလေး ဖြစ်ပါတယ်။
1981ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ(၁၆)ရက်နေ့ မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး 1998–1999 ခုနှစ်များအတွင်းမှာ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဘဝနဲ့ TV-series တွေ မှာ စတင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။
အာရှတွင် ကျော်ကြားရုံမကပဲ 2014 ခုနှစ်မှာတော့ X-Men: Days of Future Past (2014) ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ Blink ဆိုတဲ့ Superhero ဇာတ်ကောင်ကိုရရှိကာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာပါ ခြေဆန့်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အနုပညာသရုပ်ဆောင်ကြေးအမြင့်ဆုံးမင်းသမီး တစ်လက် ဖြစ်သလို လက်ရှိမှာ သူမရဲ့ Fans တွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း($100 million) ချမ်းသာတယ်လို့ ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။
သူမဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့ အခက်အခဲ ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး အမြောင်မယား၊ ငွေချူသူ ၊တိတ်တိတ်ပုန်း ကလေးမွေးထားသူ၊ အောင်မြင်မှုကို ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ဝယ်ယူသူ စသဖြင့် မရေတွက်နိုင်သော အပုပ်ချသတင်း များကြားရုန်းကန် ကူးခတ်ခဲ့ရသည်။
သို့ပေမဲ့ လည်း တဖက်တွင် သူမသည် မိဘကို လုပ်ကျွေးနေသည့် သမီးကောင်းလိမ္မာလေး ဖြစ်သလို ဘင်းဘင်းဟာ ပြည်သူတွေကို ချွေးသိပ်ကာ ရသမျိုးစုံ ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်မင်းသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ် စက်တင်ဘာ(၁၆) ရက်မှာတော့ ဘင်းဘင်းဟာ အသက်(၃၇) နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို မနှစ်က သူမရဲ့ မွေးနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ ချစ်သူကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီး ဒီနှစ်မွေးနေ့ကတော့ ကံဆိုးခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
မီလီယံနာ ၊ အနုပညာပညာကြေး အမြင့်ဆုံး မင်းသမီး ဘင်းဘင်းက ခုချိန်မှာ ဘာမှ မရှိတော့အောင် မွဲသွားခဲ့သလို ကံကြမ္မာကြီးကလည်း မျက်လှည့်ပြနေခဲ့သလိုပါပဲ။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေ အရ မင်းသမီးတစ်ယောက်၊ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်စီတိုင်းမှာလည်း ထမ်းဆောင်ရမဲ့ အခွန်ရှိသလို သူမကို အခွန်ရှောင်မှုနဲ့ သတင်းများထွက်ပေါ်ကာ စွပ်စွဲခံခဲ့ရပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနဲ့ သူမရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အားလုံးကို နိုင်ငံပိုင်သိမ်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပိတ်ထားခံရသလို အသက်(၁၈) နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ သူမရဲ့ မောင်လေးဖြစ်တဲ့Fan Chengcheng ဟာလည်း လက်၇ှိမှာ အဆိုတော် တစ်ယော်က ဖြစ်လာဖို့ ကြီုးစားနေဆဲ မို့ လက်ရှိအချိန်မှာ တမိသားစုလုံးရဲ့ အနုပညာလုပန်ငန်း လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေပါ ပိတ်ထားခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဘင်းဘင်းဟာ ပျောက်ဆုံးနေသလို တချို့က သူမ ထောင်ထဲမှာ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ခိုလှုံနေတာ၊ ထောင်ကလွတ်ပြီး တစ်နေရာမှာပုန်းအောင်းနေသည်လို့ လည်း ဆိုကြပြန်သည်။
လက်ရှိမှာသူမ ဘယ်မှာ ရှိနေမှန်းမသိရသလို သူမရဲ့ အင်စတာဂရမ်၊ဖေ့ဘုတ်နဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ အကောင့်အားလုံးကလည်း ငြိမ်သက်နေခဲ့တာ (၃) လလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မငျးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ မီလီယံနာဘဝကနေ ခြှတျခွုံကအြောငျ မှဲသှားခဲ့တဲ့ မငျးသမီးလေး ဘငျးဘငျး
တရုတျမငျးသမီးလေး ဖနျဘငျးဘငျးကတော့ ပရိသတျတှေ ရငျးနှီးကွတဲ့ ၊ မွငျဖူးနကွေ ဖွဈတဲ့ တရုတျပွညျရဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးလေး ဖွဈပါတယျ။ 1981ခုနှဈ ၊ စကျတငျဘာလ(၁၆)ရကျနေ့ မှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး 1998–1999 ခုနှဈမြားအတှငျးမှာ သရုပျဆောငျမငျးသမီး ဘဝနဲ့ TV-series တှေ မှာ စတငျ သရုပျဆောငျ ခဲ့ပါတယျ။အာရှတှငျ ကြျောကွားရုံမကပဲ 2014 ခုနှဈမှာတော့ X-Men: Days of Future Past (2014) ဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးမှာ Blink ဆိုတဲ့ Superhero ဇာတျကောငျကိုရရှိကာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီးဟောလီဝုဒျရုပျရှငျလောကမှာပါ ခွဆေနျ့နိုငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ
တရုတျနိုငျငံရဲ့ အနုပညာသရုပျဆောငျကွေးအမွငျ့ဆုံးမငျးသမီး တဈလကျ ဖွဈသလို လကျရှိမှာ သူမရဲ့ Fans တှရေဲ့ ထှကျဆိုခကျြအရ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျးပေါငျး($100 million) ခမျြးသာတယျလို့ ကွားသိခဲ့ရပါတယျ။ သူမဘဝမှာ အောငျမွငျဖို့ အခကျအခဲ ပေါငျးမြားစှာကို ဖွတျသနျးခဲ့ရပွီး အမွောငျမယား၊ ငှခြေူသူ ၊တိတျတိတျပုနျး ကလေးမှေးထားသူ၊ အောငျမွငျမှုကို ခန်ဓာကိုယျဖွငျ့ ဝယျယူသူ စသဖွငျ့ မရတှေကျနိုငျသော အပုပျခသြတငျး မြားကွားရုနျးကနျ ကူးခတျခဲ့ရသညျ။သို့ပမေဲ့ လညျး တဖကျတှငျ သူမသညျ မိဘကို လုပျကြှေးနသေညျ့ သမီးကောငျးလိမ်မာလေး ဖွဈသလို ဘငျးဘငျးဟာ ပွညျသူတှကေို ခြှေးသိပျကာ ရသမြိုးစုံ ပေးနိုငျခဲ့တဲ့ သရုပျမငျးသမီးတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနှဈ စကျတငျဘာ(၁၆) ရကျမှာတော့ ဘငျးဘငျးဟာ အသကျ(၃၇) နှဈ ပွညျ့ခဲ့ပွီး ဖွဈသလို မနှဈက သူမရဲ့ မှေးနမှေ့ာတော့ သူမရဲ့ ခဈြသူကလကျထပျခှငျ့တောငျးခဲ့ပွီး ဒီနှဈမှေးနကေ့တော့ ကံဆိုးခဲ့တဲ့ နှဈတဈနှဈလို့ ဆိုရမှာပါ။ မီလီယံနာ ၊ အနုပညာပညာကွေး အမွငျ့ဆုံး မငျးသမီး ဘငျးဘငျးက ခုခြိနျမှာ ဘာမှ မရှိတော့အောငျ မှဲသှားခဲ့သလို ကံကွမ်မာကွီးကလညျး မကျြလှညျ့ပွနခေဲ့သလိုပါပဲ။ တရုတျနိုငျငံရဲ့ ဥပဒေ အရ မငျးသမီးတဈယောကျ၊ အနုပညာရှငျတဈယောကျစီတိုငျးမှာလညျး ထမျးဆောငျရမဲ့ အခှနျရှိသလို သူမကို အခှနျရှောငျမှုနဲ့ သတငျးမြားထှကျပျေါကာ စှပျစှဲခံခဲ့ရပွီးနောကျ တရုတျနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံတျောပုနျကနျမှုနဲ့ သူမရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှု အားလုံးကို နိုငျငံပိုငျသိမျးယူသှားခဲ့ပါတယျ။
အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျလကျ လုပျကိုငျခှငျ့ပိတျထားခံရသလို အသကျ(၁၈) နှဈသာ ရှိသေးတဲ့ သူမရဲ့ မောငျလေးဖွဈတဲ့Fan Chengcheng ဟာလညျး လကျ၇ှိမှာ အဆိုတျော တဈယျောက ဖွဈလာဖို့ ကွီုးစားနဆေဲ မို့ လကျရှိအခြိနျမှာ တမိသားစုလုံးရဲ့ အနုပညာလုပနျငနျး လုပျပိုငျခှငျ့ တှပေါ ပိတျထားခဲ့ ရတာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ ဘငျးဘငျးဟာ ပြောကျဆုံးနသေလို တခြို့က သူမ ထောငျထဲမှာ၊ အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ခိုလှုံနတော၊ ထောငျကလှတျပွီး တဈနရောမှာပုနျးအောငျးနသေညျလို့ လညျး ဆိုကွပွနျသညျ။ လကျရှိမှာသူမ ဘယျမှာ ရှိနမှေနျးမသိရသလို သူမရဲ့ အငျစတာဂရမျ၊ဖဘေု့တျနဲ့ ဆိုရှယျ မီဒီယာ အကောငျ့အားလုံးကလညျး ငွိမျသကျနခေဲ့တာ (၃) လလောကျကွာမွငျ့ခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
အခြားကမ္ဘာကအလား သဘာဝရဲ့ အဆန်းတကြယ် ဖန်တီးခံထားရတဲ့ လူသားများ
ကျော်ထက်အောင်မွေးနေ့မှာ Birthday Surprise အဖြစ် ကပြခဲ့တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်းရဲ့ ဗီဒီယို
အဝတ်မဲ့သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ တစ်နာရီ (၄၅)ပေါင်အထိ ဝင်ငွေရနေတဲ့ ကောင်မလေး
အရွယ်တင်လွန်းတဲ့ ဟောင်ကောင်နာမည်ကျော်မင်းသမီး Alyssa Chia
ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ လက်ထပ်ရတာဟာ အလွန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်-ဟု ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းဖွင့်ဟ
​မြန်​မာအကကို ​ခေတ်​​ပေါ်သီချင်း​တွေနဲ့ကပြသွားတဲ့ ဆရာမလေးတဦးရဲ့ရုပ်သံ လူကြည့်များနေ…
ဖက်ရှင် Trend အရ အောင်မြင်မှုများစွာရခဲ့တဲ့ ကုလားအုတ်ခွာ အမျိုးသမီးဝတ်အတွင်းခံ
celeywar.com တွင် တင်ဆက်ထားသော content များသည် ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါ.. အွန်လိုင်းပေါ်မှ လတ်တလော စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖတ်ရှုနိုင်ရန် တင်ဆက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်. . .
သို့ဖြစ်သောကြောင့် ကူးယူဖော်ပြခံရသော အွန်လိုင်းမီဒီယာများနှင့် စာရေးသူများကို လေးစားစွာဖြင့် credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ. .
မီဒီယာများ အနေနဲ့ မိမိတို့ content များ ကူးယူဖော်ပြတာကို ကန့် ကွက်လိုပါက [email protected] ကို စာရေးသားပေးပို့ကန့် ကွက်နိုင်ပါတယ် . . . . . . .
အွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ Challenge တစ်ခုကို...
ရေကန်ထဲက ပုံအလန်းတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်တဲ့...
အဝတ်မဲ့သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ တစ်နာရီ (၄၅)ပေါင်အထိ...
CLEAR, DOVE, SUNSILK တို့ရဲ့ Total Hair Natural...
ယက်ကန်းစင်တွေကို သွားပြီး ကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့တဲ့...
(၂၂)ပေရှည်တဲ့ မုတ်ဆိတ်မွှေးနဲ့ ထူးထူးခြားခြား...